स्वास्थ्यका लागि वर्षायाममा हरियो सागसब्जी कत्तिको लाभदायक ? - ज्ञानविज्ञान
सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । तर, वर्षायाममा ? मौसममा आउने परिर्वतनले हाम्रो जीवनशैलीमा पनि प्रभाव पार्छ । हामी आफ्नो जीवनशैली मौसमको हिसावले परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छौं । जाडो समयमा न्यानो र तातो खानेकुरा हाम्रो रोजाईमा पर्छ भने गर्मी मौसममा चिसो र शितलता प्रदान गर्ने खानेकुरा र पहिरनको छनौट गर्छौं ।
यी मौसम बाहेक वर्षायाममा पनि हाम्रो खानेकुरा र पहिरनमा केही न केही फरक भने अवश्य हुन्छ । यो मौसममा कहिले चिसो त कहिले तातोको अनुभव हुने भएकोले अरु मौसम भन्दा वर्षायाम अलि फरक हुन्छ ।
यो समयमा खानेकुराहरु पनि भिन्दै किसिमको खान मन लाग्छ । पानी परिरहेको समयमा तात्तातो पाकौडा र चियाको कल्पनाले पनि मन नै फुरुङ पारिदिन्छ ।
यद्यपि, वर्षायाममा खाने खाद्य पदार्थमा अरु समयमा भन्दा बढि ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्य मौसममा स्वस्थकर मानिने हरीया तरकारी वर्षातको मौसममा स्वास्थको लागि हानिकारक पनि हुन सक्छ ।
हिजाआज बजारमा वेमौसमी तरकारीहरु जस्तै काउली, बन्दाहरु समेत उपलब्ध हुन थालेका छन् । जसको सेवनले हाम्रो स्वास्थलाई हानी पुर्‍याउन सक्छ । त्यस्ता पात भएका तरकारीमा रोगका किटाणुहरु, किराहरु समावेश भएका हुन्छन् । जसको सेवन गर्नाले हामीलाई विभिन्न रोग लाग्न सक्छ ।
वर्षायाममा ती हरीया तरकारीहरुको पातमा रोगका किटाणुहरु लुकेका हुन्छन् । ती रोगका किटाणुहरुले फोहोर र आकाशबाट परेको पानीसंगै ती तरकारीका पातहरुमा आफ्नो घर बनाएका हुन्छन् ।
वर्षायाममा धेरै बिरामी हुने प्रमुख कारण नै तरकारीबाट फैलने संक्रमणहरु हुन् । वषर्ायाममा तरकारीबाट फैलने संक्रमणहरुबाट बच्नका लागि के गर्ने ?
पानीमा उमालेर मात्र तरकारी पखाल्ने
जसरी हामी पिउने पानी उमालेर मात्र पिउँछौ, त्यसैगरि सागपात र फलफुल पनि उमालेको पानीले पखाल्नु पर्छ ।
सूर्य किरणबाट उत्पन्न हुने तातो
वर्षायाममा सूर्यको किरण केहि मध्यम हुन्छ, जसका कारण सबैतिर ओसिलो र चिपचिप हुने गर्छ । ओसिलोपनका कारण स-साना किटाणु तथा भाइरस बढ्न थाल्छ ।
त्यस्तो परिस्थितिमा किटाणु समावेश भएका तरकारी खानाले हाम्रो पाचन प्रक्रियामा सिधा असर गर्छ । जसका कारण शरीरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरु उत्पन्न हुन थाल्छ । छालाको एलर्जी, टाइफाइड, झाडावान्ता जस्ता अनेक समस्याहरु वर्षायाममा देखिने रोगहरु हुन् ।
तरकारीमा लगाईने केमिकल इन्जेक्शनबाट बच्न
वर्षायाममा तरकारीलाई हरीयो देखाउनका लागि तरकारी उत्पादकहरुले ती तरकारीहरुमा हानिकारक केमिकलयुक्त इन्जेक्सन लगाउने गर्छन् । जुन हाम्रो शरीरका लागि अति नै नोक्सानदायक हुन्छ । त्यसले हाम्रा छाला र पेट सम्बन्धि समस्या उत्पन्न गराउँछ ।
लो मेटाबोलिज्म (पाचनपक्रिया)लाई ध्यान दिनुहोस्
वर्षायाममा हाम्रो पाचनपक्रिया सुस्त हुने गर्छ । त्यसैले स्वस्थ्यकर र स्वादिलो खाना खानु पर्छ भनेर काँचो, तेलयुक्त, धेरै पिरो, मसलायुक्त र पात भएको तरकारी सेवन गर्नु हुँदैन । त्यस्ता खानेकुराले पेट फुल्ने, अपच हुने, झाडाबान्ता हुने तथा ज्वरो आउने जस्ता समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् ।
वर्षायाममा हाम्रो उर्जा शक्ति कम हुने भएकोले विहानको खाना खाए पछि सुत्नु हुँदैन । हरियो पात भएको तरकारी भन्दा मौसम अनुसारको भिन्डि, परवर, बोडि, तितेकरेला जस्ता तरकारीहरु सेवन गर्नु पर्छ ।
बाहिरका झिंगा भन्केका खानेकुरा तथा पात भएका तरकारी तथा ती तरकारीबाट बनेका खानेकुराहरुको सेवन गर्नु हुँदैन ।
यति बेला नेपालमा मध्य गर्मी छ । गर्मीयाममा खानेकुरामा निकै सचेत हुनुपर्छ । विशेषगरी राति खाने खानामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, ता कि निद्रा तथा पेटसम्बन्धी कुनै प्रकारको समस्या नआओस् । यस्ता खाद्यपदार्थको सेवनले शरीरमा शक्ति र तरलताको मात्रा पूरा गर्न सघाउ पुग्छ । मौसम अनुसारका के–के खानेकुराहरु खाँदा स्वास्थ्य लाई फाईदा हुन्छ ? आउनुहोस् जानौँ
ग्रीष्म ऋतु (वैशाखदेखि जेठ)
यो मौसममा पुरानो गहुँ, जौ, सातु, खीर, दूध, चिसो पदार्थ, काँचो आँप, करेला, परवर र खरबुजा खानुस् । तेल हालेको, मसला धेर भएको, नूनिलो र तातो कुरा नखानुस् ।
वर्षा ऋतु (असारदेखि भदौ)
यो ऋतुमा पुरानो चामल, पुरानो गहुँ, खिचडी र हलुका पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ । बर्खामा पाचनशक्ति कमजोर हुन्छ, त्यसैले कम भोजन गरेको राम्रो हुन्छ ।
शरद ऋतु (असोज र कार्तिक)
यो ऋतुमा चाहिँ पाचनशक्ति प्रबल हुन्छ र खाना पनि मज्जाले पच्छ । तातो दूध, घिउ, सक्खर, मिश्री, खीर, अमला, कागती, नरिवल, काउली खानुस् । तागत बढाउने काजु किसमिस खानुहोला ।
हेमन्त ऋतु (मंसिर)
स्वास्थ्य बनाउनका लागि यो ऋतु सर्वोत्तम मानिएको छ । पौष्टिक र भिटामिन भरपूर भएको खाद्यपदार्थ खानुस् । दूध, खुवा, नयाँ चामल, अनार, तिल लगायतका कुरा खानुस् । चिसो कुरा पटक्कै नखानुस् ।
शिशिर ऋतु (पुसदेखि माघ)
यो मौसममा घिउ, सिधे नून, मुँगको दालको खिचडी, अदुवा र तातो कुरा खानुपर्छ । तारेको वा भुटेको, चिसो वा बासी भोजन र बेमौसमी खाना नखानुस् ।
वसन्त ऋतु (फागुनदेखि चैत)
यतिखेर गर्मी हुन्छ । जौ, चना, गहुँको रोटी, चामल, मसँग, रहर, मूला, परवर, करेला, काँक्रो, जीरा, अमला आदि खानुस् । अमिलो कुरा नखानुस् ।
बढी खानेकुरा खाँदा अनावश्यक रुपमा तौल बढ्छ । मानिस सानो उमेरमै मोटोपनको सिकार बन्छ । मोटोपनका कारण डायबिटिज, मुटुका रोग, हाइपरटेन्सन र स्ट्रोकको खतरा हुन्छ । मोटोपन हुनु भनेको मृत्युको अर्को कारण पनि हो । हरेक वर्ष २८ लाख युवाको मोटोपनका कारण वर्षेनी मृत्यु भइरहेको छ ।
खाएको खानेकुरा केही मिनेटदेखि धेरै घन्टासम्म पेटमै रहन्छ । तर, त्यो खानाको परिणाममा निर्भर पर्छ । ठिक्क परिणामको खाना खाँदा पेटबाट रित्तिन करिब दुईदेखि तीन घन्टा लाग्छ । त्यस्तै उच्च चिल्लो पर्दाथयुक्त खाना खादा ६ देखि ८ घन्टा लाग्छ ।
शरीरका अंगमा हानि
बढी खादा पेट, ब्लाडर, लिभर, मिर्गौला, मुटुलगायत शरीरका अंगमा हानि हुन्छ । धेरै खानेकुरा खाँदा शरीरका विभिन्न अंगलाई पचाउनदेखि अन्य कार्य गर्न थप परिश्रम गर्नुपर्छ । तसर्थ आजैदेखि धेरै खान छाड्नुहोस् र रोगमुक्त हुनुहोस् ।
हिक्क हिक्क आउँछ
जब खानास्वादिलो हुन्छ, खाने मात्रा धेरै हुन्छ । खान हतार पनि हुन्छ । छिटोछिटो खाने शैलीले मुखभित्र बढी हावा छिर्छ । त्यसपछि तपाईंलाई हिक्क हिक्क लाग्न थाल्छ । कुनै बेला निकै डकार आउँछ ।
फुकेको भुँडीले तपाईको फोक्सोलाई बढी भार दिन्छ, ताकि तपाईंमा स्वाँस्वाँ बढ्छ । यसले श्वास फेर्न गाह्रो पर्छ । तसर्थ ठूलो भाग खानुअगाडि धेरैपटक सोच्नुहोस् । श्वासै फेर्न नसकेर या उकुसमुकुस भएर अस्पताल नै जानुपर्ला ।
खानाको पाइप बन्द
बढी खाना खाएपछि पेट ठूलो हुँदा खानाको पाइप र पेटबीचको बाटो बन्द हुने खतरा हुन्छ । जसका कारण खाएको खाना पेटबाट उल्टै खानाको पाइपमा फर्किन्छ र मुटु नजिकैको क्षेत्रमा एक प्रकारको जलन हुन्छ ।
अत्यधिक खाँदा हाई आउने र अल्छी लाग्ने हुन्छ । पेटभित्र खान पचाउने तापमानलाई बढी समय कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । थप खाना पचाउन निश्चय नै शरीरलाई बढी ताप चाहिन्छ ।
पाचन प्रणालीलाई सघाउन तपाईंको रगत दिमागबाट बाहिर जान्छ । दिमागमा रगतको अभाव हुँदा फुर्तिलो बन्न गाह्रो हुन्छ र जतिखेर पनि उङ्ने समस्या हुन्छ ।
अत्यधिक खानाको प्रभावले निद्रा लाग्ने हर्मोन (मेलाटोनिन) उत्पादनमा समस्या पर्छ । चिनी र कार्बोहाइड्रेडयुक्त खानाले शरीरमा सुगरको मात्रा बढाउँछ ।
याे भिडियाे पनि हेर्नुहाेला
Don't Miss it यस्ताे सानाे सानाे बानीले गर्दा तपाइकाे कपाल तथा छाला बिग्रीरहेकाे छ, जान्नुहाेस्
Up Next जीवन सम्बन्धि प्रसिद्द तथा सत्य वचनहरू – यि कुरालाइ कहिल्यै बवेस्ता नगर्नुहाेस
फाइबरको कमी हटाउनका लागि आहारमा यी भोज्यपदार्थहरू संलग्न गर्नुपर्छ
फल स्याउ र नास्पाती जस्ता फललाई बोक्रैसहित खाँदा शरीरलाई पानीका साथै फाइबर पनि प्रचूर मात्रामा प्राप्त हुन्छ । बिहानै फलको…
ल्वाङको प्रयोग कसरी गर्ने ? थाहा पाउनुहोस्
प्रयोग गर्ने तरिका टाउँको दुखाई: १० वटा ल्वाङ पिसेर नरिवलको तेलमा मिसाउने र टाउको दुखेको समयमा मालिस गर्ने । मुखमा घाउः…
बासी रोटी खाँदा धेरै रोगबाट छुट्करा पाउन सकिन्छ
ग्यास्ट्रिकको समस्या लामो समयसम्म भोकै रहँदा यदि तपाईंलाई पनि ग्यास्ट्रिक तथा एसिडिटीको समस्या छ भने बिहानै उठेर दूधसँग बासी रोटी…
वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउने टिप्स
– वैवाहिक जीवनलाई सफल बनाउने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो पनि हो कि तपाईं आफ्नो जीवन साथीलाई कुनै तेस्रो व्यक्तिका अगाडि…
आफुलाई स्वस्थ र अाकर्षक बन्न अपनाउनुहाेस् यी उपाय
बाहिर नखाने बाहिर रेस्टुरेन्टमा गएर खानुभन्दा घरको खाना खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । घरको खाना ताजा र स्वास्थ्यवद्र्धक हुन्छ…